Lifestyle – Shwe Yaung Lan
ဒီလက္ခာတွေ အားလုံးပြနေပြီဆိုရင် သင့်ချစ်သူကို သတိထားသင့်ပါတယ်နော်
သူမ ဒီလို လှပသွားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးက…. 😮
တစ်နေကုန်တောင်းရမ်းပြီး ရလာတဲ့ ထမင်းထုပ်အား ဗိုက်ဆာနေသော်လည်း ညီမလေးကို ဦးစားပေးကာ ခွံ့ကျွေးနေသော ကောင်လေ
August 29, 2021 SYL 0
တစ်နေကုန်တောင်းရမ်းပြီးမှ ရလာသော ထမင်းထုပ်လေးအား ဗိုက်အရမ်းဆာနေသော်လည်း ညီမလေးဖြစ်သူကို ဦးစားပေးကာ ခွံ့ကျွေးခဲ့သော ကောင်လေး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ QuezonCityလမ်းမပေါ်တွင် နေထိုင်သော မိဘမဲ့ အိမ်ခြေရာမဲ့ဖြစ်နေသော မောင်နှမနှစ်ယောက်ဧ။် ပုံရိပ်လေးသည် မြင်တွေ့သူတိုင်းဧ။် စိတ်နှလုံးကို ထိရောက်စေခဲ့ပြီး မျက်ရည်ကျစေခဲ့သည်။ မောင်နှမနှစ်ဦးမှ အစ်ကိုဖြစ်သူသည် ဒေသရှိ ကြက်ကြော်ဆိုင်လေးရှေ့တွင် အမြဲလိုလိုတောင်းရမ်းလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်လေ တစ်နေသာကုန်သွားသော်လည်း စားစရာမရှိသည့် နေ့ရက်လေးတွေနှင့် ကြုံခဲ့ရရှာသည်။ ကောင်လေးသည် တောင်းရမ်း၍ရသော စားစရာထုပ်လေးကို ဆွဲပြီးညီမလေးဖြစ်သူရှိရာသို့ အပြေးအလွှားသွားရောက်ကာ မည်မျှဆာလောင်နေပါစေ […]
August 27, 2021 SYL 0
အသက်မဲ့နေသောဖုန်းအဖိုးအိုတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကီးပက်ဖုန်းလေးကိုဖုန်းပြင်တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြတယပြင်ပေးတဲ့သူကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြီးဒီဖုန်းကကောင်းပါတယ်ဘာမှမ ပျက်စီးသေးဘူးခေါ်လို့လည်းရပါတယ်အဖိုးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်အပြည့်နဲ့ဒါဆိုအဖိုးရဲ့သားသမီးတွေကဘာကြောင့်ဒီဖုန်းလေးကိုမခေါ်ကြတာလည်းလူလေးရယ်မိဘတွေလိုချင် တာငွေမဟုတ်ပါဘူးသိတတ်မှု့ပါမိဘတွေလိုချင်တာရွှေမဟုတ်ပါဘူးဂရုစိုက်မှု့ပါသား,သမီးတိုင်းမိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြပါစေ အသက္မဲ့ေနေသာဖုန္းအဖိုးအိုတစ္ေယာက္ကသူ႕ရဲ႕ကီးပက္ဖုန္းေလးကိုဖုန္းျပင္တဲ့ဆိုင္မွာသြားျပတယျပင္ေပးတဲ့သူကစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ၿပီးဒီဖုန္းကေကာင္းပါတယ္ဘာမွမ ပ်က္စီးေသးဘူးေခၚလို႔လည္းရပါတယ္အဖိုးမ်က္လုံးထဲမွာမ်က္ရည္အျပည့္နဲ႕ဒါဆိုအဖိုးရဲ႕သားသမီးေတြကဘာေၾကာင့္ဒီဖုန္းေလးကိုမေခၚၾကတာလည္းလူေလးရယ္မိဘေတြလိုခ်င္ တာေငြမဟုတ္ပါဘူးသိတတ္မႈ႕ပါမိဘေတြလိုခ်င္တာေ႐ႊမဟုတ္ပါဘူးဂ႐ုစိုက္မႈ႕ပါသား,သမီးတိုင္းမိဘေက်းဇူးဆပ္နိုင္ၾကပါေစ မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ Photo Credit to Owners
August 18, 2021 SYL 0
မလိုလားတဲ့အမွှေးအမျှင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်VASELINEကိုအသုံးပြုလိုက်ရအောင်Vaselineကိုနည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်မိခင် အများစုကကလေးဒိုက်ပါခံတာများလာလို့အသားအရေနီရဲလာတဲ့အချိန်မှာသုံးနိုင်သလိုအသေးအဖွဲထိခိုက်ရှနာအပူလောင်တွေမျိုးအတွက်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ အတွက်သုံးပေးနိုင် ပါတယ်Vaselineရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ခြောက်သွေ့မှုအတွက်အစိုဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးတာမို့အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းမလိုလားတဲ့အေမွှးအ မျင်တွေကိုဖယ်ရွားဖို့အတွက် VASELINEကိုအသုံးပြုလိုက်ရအောင်အသားအရေကွဲအက်ခြင်းတို့အတွက်လူအများစုအသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုယ်ပေါ်က မလိုလားအပ်တဲ့အမွှေးအမျှင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် Vaselineကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာပါလိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများကုလားပဲမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်နနွင်းမှုန့်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်နို့မှုန့်စားပွဲတင်ဇွန်း၃ဇွန်းVaselineလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်ပြင်ဆင်ပုံအဆင့်ဆင့်၁အထက်ဖော်ပြပါပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲ မှာမှVaselineကိုခဏဖယ်ထားပြီးပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲမှာ အကုန်ရောမွှေပေးပါပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဖြစ်လာတဲ့အထိမွှေပေးပါ၂ရလာတဲ့အနှစ်ထဲကိုVaselineပေါင်းထည့်ပြီးဆက်မွှေ ပေးပါ၃နှံ့သွားပြီဆိုရင်တော့မလိုလားတဲ့အမွှေးအမျှင်တွေရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာအနှစ်ကိုလိမ်းပေးပါ၅အနှစ်လုံးဝခြောက်သွားတဲ့အထိ ထားပေးဖို့လိုအပ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ငါးမိနစ် မှ၁၀မိနစ်ခန့်ကြာမြင့် တတ်ပါတယ်မလိုလားတဲ့အေမွှးအမ်ွင်တြေကိုဖယ်ရွားဖို့အတြက်VASELINEကိုအသုံးပြုလိုက်ရအောင်၅ခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အမွှေးပေါက်ရာနဲ့လားရာဆန့်ကျင်ဖက်ကနေပြီး ဆွဲခွာပေးပါခွာပြီးနောက်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်လိုက်ပါဒီနည်းလမ်းလေးကိုတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သလိုနှုတ်ခမ်း အပေါ်နားမှာနှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေးပေါက်လို့စိတ်ညစ်နေတဲအမျိုးသမီးတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ် မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ Photo Credit to Owners
August 7, 2021 SYL 0
စေနသားသမီးမ်ားဟာအခ်စ္ႀကီးတယ္။ သံေယာဇဥ္ႀကီးတယ္။ ခ်စ္သူေဖါက္ျပန္ရင္ေတာင္ခြင့္လြတ္နိုင္တတ္တယ္။ အေျပာေကာင္းတယ္။သေဘာေကာင္းတယ္။သဝန္တိုတတ္တယ္။ သူမ်ားထက္ပိုၿပီး သဝန္တိုတတ္တယ္။ ကိုယ္ကေတာ့မစဘူး။ ကိုယ့္ကိုစလာရင္ပါပါသြားတတ္ပါတယ္။ လက္သာရင္လိုက္တဲ့ကေလးလိုပဲ။ ပိုဂ႐ုစိုက္တဲ့သူေနာက္ပါပါသြားတတ္ၾကတာစေနသားသမီးပါပဲ။ စေနနဲ႔ ႀကိဳက္ရင္ေတာ့ ပိုဂ႐ုစိုက္နိုင္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားေပေတာ့ ။ ေနာက္တစ္ခု က စေနသားသမီးက ၾကာရင္ ၿငီးေငြ႕သြားတတ္ၾကတယ္ ။စေနသားသမီး နဲ႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ သမီးရည္းစားျဖစ္ၿပီးရင္ ယူခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့သြားတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ စေနသားသမီး နဲ႔ ႀကိဳက္ရင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယူဖို႔သာလုပ္ နို႔မို႔ဆို […]
မချစ်မိခင်မှာ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို ပျိုမေတို့ သိရှိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀) ချက်
ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့်သူ သို့မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို ပျိုမေ တို့ စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ရည်းစားများတဲ့ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်မိရင် ပထမဆုံးထိခိုက်နစ်နာရမှာက ပျိုမေတို့ဖြစ်ပြီးတော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် နောင်တရစရာ စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ယခုလို လူရှုပ်တစ်ယောက်ကို မရွေးချယ်မိဖို့အတွက် သူဟာလူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိထားမိစေနိုင်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကို မျှဝေပေးပါရစေ။ ၁။ သင်နဲ့တွဲနေတာကို အခြားသူတွေ မမြင်လိုဘူး သင့်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်က တကယ်ချစ်တဲ့အခါ တကမ္ဘာလုံး သိအောင်ချပြဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်ပါဘူး။ […]
မကြာခဏရန်ဖြစ်တိုင်း FB/phone Block တက်သူများသာဖတ်ရန်
မကြာခဏရန်ဖြစ်တိုင်း FacebookကိုBlock လိုက် ဖုန်းကိုBlock လိုက်နဲအဲလိုချစ်သူစုံတွဲတွေရှိလား….?။ ဒါဆိုရင်သေချာတာကတော့ အဲစုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာလက်ခံပါသလား…?။💓 💓ဖုန်းခေါ်လိုမအာ်း သေချာပြီ ဒီနေ့ရန်ဖြစ်ရတော့မယ် ဆိုတာ။သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနဲများဖုန်းပြောတာလိုပြောရင် သဝန်တိုပြီး ဖြေရှင်းမရ၊ပြသနာရှာတက်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိနေပြီလား။ဒါဆိုသင်ဟာအရမ်းကံကောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်အပေါ်သူအရမ်းချစ်တဲ့သူမို့ပ ါ။စိတ်ဆိုးပြီးဖုန်းကို Block ထားပေမယ့် တခြားဖုန်းနဲ ဖုန်ပြန်ဆက်ချော့မှာကို မျော်နေတဲ့သူတစ်ယေ ာက်ပါ။သင့်ပေါ်စိတ်ဆိုးတိုင်း Block တိုင်သေင်ဘက်ကတခြားနည်းနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ် ပြီးရှင်းပြပါ။💓 💓မကြာခဏ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရန်ဖြစ်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖုန်းပြန်ဆက် Messageပို့မှာမျော်နေတဲ့သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြလိုဆိုတာ သင်ငြင်းပါသလား…?။ 💓 💓စိတ်ဆိုးတိုင်း စကားအကြမ်းတွေနဲတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အကျိတ်အနယ်ပြောပြီ […]
ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပေါင်းတင်နည်း (၈)မျိုး
August 4, 2021 SYL 0
ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပေါင်းတင်နည်း (၈)မျိုး ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်ပေါင်းတင်နည်းများ ၁။အသားအရေစိုပြေစေရန်ပေါင်းတင်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်‌အလယ်သား အနှစ်လေးတွေကို ဇွန်းနဲ့ခြစ်ယူပြီး ရလာတဲ့ ဂျယ်အနှစ်လေးတွေကို မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် သုံးဆယ်ခန့်ခြောက်သွေ့အောင်ထားပြီး ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ။ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ခန့်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အသားအရေ စိုပြေတင်းရင်းစေပြီး ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း အသားအရေ‌ခြောက်သွေ့ယားယံခြင်း၊ အသားအရေရောင်းရမ်းခြင်း များကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ၂။ဝက်ခြံအမာရွတ်နဲ့အမဲစက်အတွက်ပေါင်းတင်းနည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို ဇွန်းနဲ့ခြစ်ယူပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး အစေ့ထုတ်ပြီးသားတစ်လုံးကို ဓားသန့်သန့်ဖြင့် နုတ်နုတ်ဆင်းပြီး ရလာသောအရည်ကို ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်နဲ့ဆတူရောပြီး သမအောင် မွှေနှောက်ပေးပါ။ ရလာသောအနှစ်အရည်ကို […]
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်များ
July 31, 2021 SYL 0
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်များ သွေးအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သွေးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းဆီမှာ မတူညီတဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ (၁) A သွေးအမျိုးအစား အေသွေးပိုင်ရှင်လေးတွေဟာ အရမ်းကို တိကျတယ်၊ စေ့စပ်သေချာတယ်၊ အသေးစိတ်တယ်၊ ဇီဇာကြောင်တယ် ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့ဟာ သူများတွေထက် ထူးချွန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့သူတွေကလည်း ဒီအကျင့်တွေကြောင့်ပဲ သူတို့ကို အမြင်ကပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ငြိမ်ပြီး အရှက်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် စကားဝိုင်းတွေမှာ […]